पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ: बाबुराम भट्टराई – Karnalisandesh
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ: बाबुराम भट्टराई
प्रकाशित मितिः १५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १२:३६ February 27, 2020
काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसहित सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै डा.भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सम्पूर्ण पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । ‘गाउँमा सानो बुकुरो भएकाहरुले कसरी काठमाडौंमा महल बनाए ?’ भट्टराईले प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘म लगायत हामी सबै हिजो त साथीहरुले दिएको लुगा लगाएर, चप्पल लगाएर हिडेका थियौँ । आज हामी कसरी सुटेड बुटेड भएका छौँ रु कसरी चिल्ला कार चढेर हिडिरहेका छौँ रु कसरी हाम्रा महल छन् ?’ डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पत्ति यति छिटो कसरी बढ्यो भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
प्रधानमन्त्रीको तेह्रथुमको बुकुरो भन्दा गोरखामा रहेको आफ्नो घर राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको अस्ति तेह्रथुमको बुकुरो हेर्दा मेरो गोरखामा घर त्यो भन्दा राम्रो छ। त्यस्तो बुकुरो भएका हामी प्रधानमन्त्रीहरु अहिले काठमाडौंमा महल जोड्ने हैसियतमा कसरी पुग्योँ ?’ अहिले देखिएको दृश्य कमाईले कसैको पनि काठमाडौमा महल बनाउने हैसियत नपुग्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘म अलिकति गणितमा चाँसो राख्ने मान्छे पनि हुँ । अर्थमन्त्री पनि भइटोपलेको मान्छे। मैले जति लाख प्रयन्त गर्दा पनि हाम्रो कमाईले, हाम्रो जुन देखिएको दृश्य कमाइले त्यो बुकुरो कमाईले यहाँ काठमाडौंमा महल बनाउन पुग्दैन। यसको छानबिन गरौँ। त्यसका लागि म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।’
उनले मातातिर्थ लगायत जग्गाका विषय उचालेर लोकमान कार्की प्रवृत्ति देखाउन खोजिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। मातातिर्थ लगायतको जग्गाका सन्र्दभमा आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरु राजनीतिक, कानूनी र नैतिक रुपमा ठिक रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले प्रतिसोध, असहिष्णुता वा निषेध गर्ने के प्रवृृतिले यस्तो गर्न खोजिएको हो भन्दै आशंका व्यक्त गरे।
दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकारका प्रधानमन्त्री कमजोर भएर आशंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले कुर्सीमा बसेर डराउनु नपर्ने बताए। डा.भट्टराईले लोकमानले झैं तर्साएर झुकाउने प्रधानमन्त्रीले सोच्नु भएको भए २०५१ सालको प्रसंग सम्झिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘जतिबेला २०५१ सालमा जनयुद्धको तयारी गर्दै थियौँ । त्यतिबेला चर्चित भित्तेकाण्ड भएको थियो।
त्यतिबेला सिंहदरबार अगाडी म लगायत साथीहरु उहाँ (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा उहाँका अरिंगाल सेनाले मलाई आएर खुकुरीले हानेको प्रसंग अहिले पनि याद छ। त्यसैले उहाँले लोकमानले झै तर्साएर झुकाउँछु भन्ने ठानेको हो भने त्यो प्रसंग सम्झिदा राम्रो होला। त्यसले कसरी जनयुद्धमा आगो बालेको थियो र त्यसको परिणाम के थियो त्यो सम्झँदा ठिकै होला। यो समय आरोप प्रत्यारोपको विषय होइन।’
भट्टराईले अहिले चारैतिर यतिको चर्चा चुलिएको भन्दै नेपाल ट्रष्टको जग्गा यतिको पोल्टामा कसरी गएका छन भन्दै प्रश्न पनि गरे । ‘अब यति होल्डिङप्रति नै विशेष अनुराग भएर उसलाई अझै नपुगेको हो, अझै दिनुपर्ने हो ? मोहीहरुले बरु नपाए नपाउन भन्ने चाहाना हो भने यो पनि गम्भिर विषय हो छलफल गरुन्। यो त दृष्टिकोणको कुरा भयो। जनताको जमिन खोसेर आफ्नो आसेपासेलाई दिने की जोताहा मोहीलाई दिने हो भन्ने गम्भिर छलफलको विषय बन्छ’, भट्टराईले भने। देश भ्रष्टाचारले थिलथिलोमा परेको भन्दै भट्टराईले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा दोषिलाई दण्डित गर्ने प्रवृति अंगाल्नुपर्ने बताए।